Kim Jong Un Velona sy salama tsara
Nahoraka hatramin'ny alahady hariva teo fa nodimandry rehefa tsy nahazaka ny fandidiana natao tamin'ny fony ny filoha Koreanina tavaratra, Kim Jong Un ary efa mivonona handimby azy ny anabaviny, Kim Yo Jong.
Ny 25 aprily teo moa no efa nanomboka niely tsikelikely tamin’ireo haino aman-jery Sinoa sy Japoney ity tsaho ity. Nandiso io vaovao io kosa omaly ny tao an-dapa ary nilaza fa tena velona sy salama tsara ity mpitondra mbola tanora dia tanora ity. 36 taona amin’izao fotoana izao ny lehilahy ary tsiahivina fa ny taona 2011 izy no nandray ny fahefany. Mbola mitohy indray izany aloha ny Jadona ao an-toerana, hoy ireo mpamakafaka.